Arabisc: Asa Misokatra Ao Bahrain? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 17:31 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Marsa 2007 ity adika eto ity)
Bilaogera Bahrainita Silverooo, izay vao nahazo diplaoma tany amin'ny oniversite no mety mahazo ny lokabe ary hanambola be noho ireo nahazo diplaoma hafa mitovy taona aminy. Ny heviny? Ny torolalana hitanao ao ankavia – Asa Misokatra ho an'ireo Tsy Manan-traikefa. Ary fantatr'ilay bilaogera izay resahany raha nanapa-kevitra hanolotra ny traikefany izy – efa nahazo ny asa nofisiny izy.
“Alaovy an-tsaina fa raha namoaka tokoa ny boky hitanao eto aho. Mino aho fa ho be mpividy izany. Eny tokoa, tsy hoe satria nanoratra izany aho fa kosa marobe ireo very sy sahiran-tsaina. Tsy milaza aho fa misy ny vahaolana majika hiantohana ny fahitana asa ao Antanimahagaga (Misaotra ny Silly Bahraini Girl, na dia ny fandikàna ny anarana aza dia hita fa mahafinaritra) satria goavana ny olana eo amin'ny tsenan'ny asa sy ny kolikolim-panjakana na dia sarotra aza ny hiantoka fa hiteraka vokatra nantenaina ny torohevitra rehetra, na ampiharina ara-bakinteny aza. Ary manohitra ireo sahy mandà ny tsy fisian'ny rariny lehibe hita ao amin'ny fikambanana aho, na sehatra tsy miankina na sehatra ara-panjakana. Mba hanapariahana ny fahatsarana sy ny fifanakalozan-traikefa, te hizara aminao ny traikefako tamin'ny fitadiavana asa tao Bahrain aho. Nalefako tamin'ny endrika toro-lalana izany izay antenaiko fa hanampy ireo handray fanamby sy hiditra amin'ity traikefa ity (na hitady asa),” hoy izy nanazava.
Amin'ny teny Anglisy ny ambin-dahatsoratr'i Silveroo ka aza misalasala mamaky izany ato.
Mikasika ny lohahevitra asa ihany, manome antsika santionany momba ny fiainany feno fandaharam-potoana amin'ny maha mpianatry ny oniversite sy mpanao gazety azy miasa amin'ny famokarana pejy ara-kolontsaina amin'ny gazety ao an-toerana ilay bilaogera Madas Ayatulla
Mety hahazoana valisoa ny fitantanana ny asa sy ny fianarana satria manome fahafahana ho an'ny mpianatra hiditra eo amin'ny tsenan'ny asa, saingy koa mety misy fiantraikany sasany.
“Raha teo am-panindriana ny kitendrin'ny solosaina tamin'ny fanondroko aho mba hiala amin'ny gazety rehefa avy niasa ela be sy mandreraka androany (talata), dia tena reraka ny hozatra rehetra. Nanomboka ny andro androany tamin'ny fianarana tany amin'ny oniversite aho, izay nandreraka ihany koa. Raha vita ny fianarana tamin'ny 4 ora hariva, tsy maintsy nanitsy indray ny famatarandrom-batako aho, satria marobe ny zavatra mbola atao”, hoy i Madas nanoratra.
“Raha ny marina, tsy maintsy nanomana ny pejy ara-kolontsaina hatramin'ny voalohany aho. Adiny telo no fotoana laniko amin'ny antso antelefônina vitsy sy mamita ny andinin-teny farany amin'ny lahatsoratra. Vita ny asako rehetra ka ny mody sisa no ataoko ary maka aina. Efa manakaiky ny tamin'ny 8 ora hariva izany. Avy eo nibitsika tato an-tsofiko ny devoly hoe: afaka mankany amin'ny Foibe Ara-kolontsaina ianao ary maka aina amin'ny feo malefak'i Khalid Al Shaikh (mpihira Bahrainita). Efa nilaza aho: Manana atsasakadiny ianao. Tsy mihoatra, na latsaka “, hoy izy nanazava.
Saingy tsy izany. Nisisika ny mpiara mianatra iray mba hijanona kely izy- ary nataony. Tapitra ny fampisehoan'ilay mpanakanto ary tapa-kevitra hiresaka amin'ny minisitry ny fifandraisana, izay nanatrika ny fampisehoana izy, izay niafara tamin'ny adihevitra mafana momba ny fetiben'ny Lohataonan'ny Kolontsaina. Nanohitra ny iray tamin'ireo fizaran-tantara ny solombavambahoaka ao Bahrain ary nanangana komity mpanao fanadihadiana mba hijery ny olana. Miteny amin'ny anaran'ireo mpihira sy mpanakanto rehetra ao Bahrain i Al Shaikh nandrisika ny minisitra mba tsy hiala tsiny amin'ireo solombavambahoaka.
Mazava ho azy fa ny dikan'izany rehetra izany dia mbola ho ela vao ho tapitra ny asan'i Madas. Tsy maintsy manao tantara iray hafa ho an'ny gazetiny izy!